Intshayelelo network Ukuprintwa umsebenzi wayo - China Changzhou Plet Printing
Intshayelelo network Ukuprintwa umsebenzi wayo
Amachaphaza kushicilelo zidlala indima ebaluleke kakhulu. Amachaphaza ungadlulisela i ngamaqondo eyantlukwano, amanqanaba, kunye nemibala mfanekiso. Naziphi na zibona okanye uthumelo enziwa amasuntswana kombala okanye amasuntswana isilivere ukwenza ithoni liqhuma oqhubekayo. Le ithowuni eqhubela phambili kunye maleko kufuneka isithombe okanye ezinye iindlela icandelo umfanekiso ibe amachaphaza ezinkulu nezincinane.
Amachaphaza iyunithi nokungundoqo nemizobo kwi kwipleyiti, kwaye anoxanduva ivelise kwakhona ngokuqhatha i-nowuthsi yoqobo, umbuso lombutho, kunye umphandle mfanekiso. Ngokutsho kumgaqo uthungelwano, oko zohlulwa ngokwendidi ezimbini network awo-modulating kunye nothungelwano rhoqo-modulating. Le yokuqala iye isetyenziswe ngokubanzi. Ukusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo (screens iglasi, screens zoqhagamshelwano, kunye nobugcisa ukwahlukana zombane) bangakuphuhlisa oku hlobo lweevenkile, enokusetyenziselwa ngokubanzi ngenxa iziphumo zayo elula, ukuzila, ulungile imifanekiso. Ngelo xesha, abantu balazi kakuhle zintswelo yayo, ezifana nokuphelisa olungagungqiyo moire, ngoko kunye nophuhliso lobugcisa bokushicilela, abantu baqalisa kuphethulela ingqalelo yabo olunye uhlobo kwinethiwekhi - FM ezishishina network.
Ithiyori Ukuhlolwa frequency kwezwi eveliswe kangangexesha elithile. Ebutsheni bowe-1993, i-Division Agfa kunye iLinotype-Hell Corporation ngokusesikweni ngokusesikweni le FM womnatha zokuhlola technology. Ngo-Agasti 1993, China Umqambi Beijing University yanda eyakhe FM zokuhlola ubuchwepheshe yayo.
FM ukuhlolwa technology ingumfanekiselo iskeniwe kwaye igalelo, emva processing, ngokusebenzisa isixhobo ophumayo xa amanqaku ezilinganayo randomly kuthunyelwa kwiindawo ezahlukeneyo, inani leendawo nokuxinana, oko kukuthi, amaza imbonakalo indawo network, ku ukuze aveze lexinene umfanekiso kunye emigangatho iindlela zobugcisa. Ngoko ke, lo fineness lwe umfanekiso nto limele ayisa wachaza inani imigca emnyama namhlophe e sentimitha nganye, kodwa ichazwa ubungakanani amachaphaza. I ezincinane ubungakanani dot, ayanda ukuchana umfanekiso angamelwa. I ngcono.
Ithekhnoloji ivelisa imifanekiso ngakumbi kwiziphumo lokushicilela. Ngenxa kumanqanaba ahlukeneyo ukungakhuseleki kwi inqubo yokuthathwa, kukho umahluko ubungakanani photosensitive amasuntswana yetyuwa yesilivere kwindawo enye. Emva uphuhliso, kukho zimbalwa isilivere amasuntswana lweTyuwa loxinano eliphantsi kumfanekiso, kwaye kukho ezininzi amasuntswana ityuwa isilivere leyo ezixineneyo, kwaye ukutshintsha lexinene umiselwa inani kwamasuntswana yetyuwa yesilivere kwimimandla eyahlukeneyo. Oku kuyafana kwinethiwekhi FM, kunye namandla awo iziza AM yahlukile. Bona ochazwa ubungakanani amachaphaza (inani), ngoko ke asikwazi ukuphumeza isiphumo kufutshane kufota.
Okwangoku, iinkampani ziye zaziswa izakhiwo dot ezahlukeneyo kunye namagama banikwe ezahlukeneyo, ezifana Agfa kaThixo "Crystal Network", iLinotype-lesihogo "Diamond Network", Dainippon Screen kaThixo "RANDOT", njl Ngoko ke, inani kunye nendawo amachaphaza ushicilelo in image ngalinye unit ndawo yahlukile, kodwa bonke abe FM zokuhlola.
Ubungakanani enemingxuma le uvavanyo FM ixhomekeke kwi resolution output kunye parameters zokuhlola. Umzekelo, ukuba isisombululo yemveliso 2400 dpi, kunye nokuhlolwa i parameter 2 × 2 amachaphaza laser njengendawo womnatha, lo ubukhulu wekhusi 21 μm; imida zokusikrinwa ezi Nge-3 × 3 amachaphaza laser njenge ichaphaza, lo ubukhulu dot ngu 32 μm.
Kuyo yonke le nkqubo, eyona nto ebaluleke kakhulu kukuba ukuguquka kunye hlengiso kothungelwano FM. Oluphambili kukukhetha efanelekileyo randomness kunye laser umqadi ubukhulu. I-FM Amanqaku womnatha abasandula generated smooth aqinileyo, efanayo ubukhulu, kwaye amabala encinane ukukhanya ekwanti, nto leyo isitshixo ukulawula umgangatho. I entsha iyaneliseka Umatshini nokushicilela le mfuneko. Ubukhulu bepali laser umqadi zilungiswe ngokungqinelana ubukhulu dot. Ukongeza, ukuze asebenzisane inkqubo elandelayo, ingqalelo kufuneka ihlawulwe ukukhetha inzuzo dot, leyo ngokubanzi ilawulwe ngaphakathi uluhlu-5%. Ukongeza koku kungasentla, iifoto imifanekiso kufuneka zihlanjwe kunye ingqalelo ubushushu, isantya, kunye neenqobo pH, yaye kufuneka ahlambe ne-high speed izitampu ezishushu ukuqinisekisa umgangatho ngezimvo. Ngokwemiqathango bokushicilela, ngenxa yokuba akukho mda le angle lomkhusane rhoqo kwezwi, ukuchaneka kwezixhobo overprinting yi kunokuba esezantsi, kwaye inks umbala zidla kusetyenziswa nazo zamkelekile.